Maxamed Jaamac Abgaal Saylici nacaybka Waxa Uu Ka Qaaday Somaliland Nacayb | Lughaya.Com
Maxamed Jaamac Abgaal Saylici nacaybka Waxa Uu Ka Qaaday Somaliland Nacayb
Added by Adal on October 27, 2017.
Maxamed jaamac Abgaal waxa uu ka mid ahaan jiray shaqaalihii bangigiidhexe ee Somaliya, wakhtigii Siyad Bare dalka maamulayay. Isaga oo kunoolaa Muqdisho, intii gobolada Woqooyi ay colaadu ka socotay ee jabhadii SNM ay ka dagaalamaysay Woqoyi marna ma uu iman gobolka Awdal oo xaalad dagaal iyo mid siyaasadeed oo kalaguur ahi ay ka jirtay. Wakhtigaasi oo jabhadihii Beelaha Gadabuursi ay difaacayeen gobolka Awdal iyo Borama waxa uu Abgaal ka mid ahaa ragii biirka iyo dhaylada ku cuni jiray huteeladii waawaynaa ee Muqdisho maadaama uu bagiga ka shaqaynjiray waxa u sahlanayd in uu hantida dalka jeebabka ka buuxsado oo uu ku tunto. Mana ogayn dagaalada udhexeeyay SNM iyo Jabhadihii Gadabuursi ee isdifaacayay.Mana jirin wax ku dhaliya in uu necbaado SNM ama beelaha Isaaq.
Burburkii dalka kadib waxa uu u soo qaxay magaalada Borama idad badan oo reer Awdal ah
Mudo badan waxa uu ahaa nin aan shaqo hayn oo bilaa camal ah ayna masruufto xaaskiisu. Abgaal ma ahayn siyaasi ee waxa uu ahaa nin xafiis sidaadarteedna kama mid ahayn siyaasiyiintii reer Awdal ee dib u dhiskii dalkan iyo yagleelkii dawladnimo ka qayb qaatay. Waxa uu si shuruud la aan ah u taageersanaa xukuumadii guurtida Somaliland ay ku dhistay Borama ee uu madaxweynhaha ka ahaa Cigaal Tolwaana kuxigeenka ka noqday. Wakhtigaa Mr Abgaal laga maqlijirin hadalo nacaybsh ah ama danaynta in uu helo mansab siyaasadeed balse waxa uu ku qanacsanaa Tolwaa oo M/kuxigeen ah isla markaana ay isu hayb yihiin darteed. Xukuumadii Rayaale lafteedu shaqo umay dirsan isna ma mucaaradin maxaayeelay Rayaale oo ka soo jeeda beeshiisa. Hase yeeshee Tolwaa oo rabay in uu markale kusoo noqdo hogaaminta siyaasada Awdal ayaa Abgaal ku dhaliyay in uu galo siyaasada halkaasi oo urursiyaasadeedkii ASAD uu xubi ka noqday, markii uu dhacay ururkii ayaa koox uu kujiro waxa ay soo galeen KULMIYE oo ay la midoobeen.
Shirkii golaha dhex ee KULMIYE ay ku qabsadeen magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxa tartamay Cabdiraxmaan Saylici iyo Cabdiraxmaan Tolwaa halkaasi oo Saylici loo doortay in uu noqdo musharaxa rasmiga ah ee jagada M/xigeenka
Tan iyo maalitaasi laga soo bilaabo M.Jaamac Abgaal waxa uu si joogta ah u bilaabay hadalo deelqaaf ah iyo shakhsi nacayb, taasi oo uu fagaare kasta ama mijiliskastaba kaga caytamijiray erayo aan ku haboonayn oo uu ku weerarayo Saylici. Waxana uu bilaabay in uu si dadban u taageero xukuumadii UDUB ee Rayaale isaga oo aan rabin in uu Tolwaa ka cadhaysiiyo wax xil ah kama uu doonan ama Rayaalaba uma garan, sidaa darted waxa uu ka mid ahaa ragii iyaga oo aan xukuumada ku jirin hadana weerarada aflagaadada ah ku hayn jiray xisbigii kulmiye hogaankiisa sare sida Siranyo iyo Saylici. Waxa kale oo isa soo tarayay nacayb uu u qabo Somaaliland inkastoo uu markaa wali talinayay Rayaale sidaadarteed Abgaal nacaybkiisa uu u qabo Somaliland waxa qarinayay madaxweyne nimada Rayaale oo muu ahayn mid cadaystay burburinta SL.Waayo wali markaa nin ay isku beelyihiin ayaa taliya. Wakhtiyadii ay soo dhawayd doorashadii 2010kii ee Kulmiye ololaha uu ku jiray ayaa waxa rag shufto ah oo deegaanka Gabilay u dhashay waxa ay dad safar ah oo reer Awdal ah ku laayeen wadad u dhaxaysa Gabilay iyo Borama. Arintaasi oo runtii aad u foolxumayd xukuumadii Rayaale talaabooyin waxku ool ah kama aysan qaban. Abgaal waxa uu ksa mid ahaa dadkii bulsha reer Awdal kicinayay ee Xisbiga KULMIYE ku eedaynjiray falkaa oo runtii raga gaystay markii danbe xukuumada KULMIYE soo qabatay oo xabsiga ay dhigtay.
Markii hadaba xukuumadii Rayaale lagaga guulaystay doorashadii madaxtinimo ee Siranyo dalka qabtay ayay ahayd markii uu sida badheedhka ah Abgaal uu u cadaystay nacbaanshaha Somaliland
Waxa uu lugkulahaa bixitaankii Suldaan Wabar waxaanu abaabulay mudaharaadyo ka dhan ah Somaliland. Waxa kale oo uu huriyay nacayb bulsha dhexdeeda iyo fidnad qabaail oo aan hore looga arag taaariikhda Awdal.
Mr Abgaal isaga oo mawjadahaasi nacaybka ee Somaliland iyo Saylici dartii uu u samaynayo dhexmushaaxaaya ayaa waxa loo magacaabay wasiirka wasaarada bosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland magacaabistiisaasi oo ay lug ku lahaayeen rag kudhow siiraanyo waxa uu xilkaasi hayay mudo . In tii uu wasiirka ahaa waxa kale oo uu ka mid noqday golaha dhexe ee xisbiga KULMIYE waxana lagu xasuustaa in uu ka mid ahaa ragii sida qaawan uga soo horjeeday M/kuxigeenka, waxana xusid mudan in M.J Abgaaluu ahaa kooxdii isbahaysiga sharka ee uu Xirsi hogaaminayay ee ka soo horjeeday Saylici iyo Muuse Biixi wakhtigii uu khilaafku ka dhex aloosnaa xisbiga Kulmiye iyo xukuumada. Waxa kale oo xusid mudan in Abgaal uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii farkutiriska ahaa ee ka codeeya Saylici xubnihii golaha dhex kaga jiray xisbiga KULMIYE beesha ee Gadabuursi tartankii musharaxnimada M/weyne kuxigeenka.
Ugu danbayntii waxa uu lunsaday hanti dawladeed isaga oo maraakiib shariikado ka qaaday lacag laaluush ah oo uu bedelkeeda ugu fududaynayo liisano ay kgaga haqwlgalaan Somaliland. Arintaasi waxa ay keentay in xukuumada laga saaro waxaanu markale fursad u helay in uu banaanka ka caytamo. Waxa uu bilaabay in uu ka hadlo saamiqaybsi isaga oo bulshada reer Awdal kadalbay in ay codkooda meel mariyaan saamigaasi oo aanu intii uu wasiirka ahaa soo hadal qaadi jirin. Waxa kale oo uu fagaarayaasha ka sheegaa in uu Suldaan Wabar soo hoyndoono hadii uu WADANI ku guulaysto. Hadalada tookha iyo faanka iyo xiqdiga ah ee Maxamed Jaamac Abgaal in hadii lagaga guulaysto tartanka WADANI ay Somaliland ka tashandoonaan.
Iskusoo wada duub oo M.J Abgaal waxa uu u xuubsiibtay Somaliland nacayb uu ka qaaday Saylici nacayb.